Tinder waa codsiga mobile ee ugu faa'iidada badan (marka laga reebo ciyaaraha), ka hor Netflix - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Tinder waa codsiga mobile ee ugu faa'iidada badan (marka laga reebo ciyaaraha), ka hor Netflix
Tinder waa codsiga mobile ee ugu faa'iidada badan (marka laga reebo ciyaaraha), ka hor Netflix
Ciyaaraha ma aha barnaamijyada moobiilka ee kaliya ee abuuri kara dakhliga weyn. Intaa ka sokow, marka laga reebo ciyaaraha, Tinder ayaa kaliya ku guuleysatay kaalinta koowaad ee Netflix sida ku cad takhasusiyaha Sensor Tower.
shootali waxay noqon laheyd midka ugu faa'iidada badan ee Google Play Store iyo iTunes App Store sida ku xiran Sensor Tower ee wareegga koowaad 2019. Adeegga shukaansiga ee internetka ayaa meesha ugu horreeya ka xaday Netflix, taas oo sanado badan loo haystay. Diiwaanka udubdhexaadka ah ee maaraynta socodka hadda ka baxsan codsiga, waa weyn ee SVOD waa inaan dib u helin taajkii.
Tinder wuxuu noqonayaa midka ugu macaamilka badan ee moobaylka laga bilaabo ciyaaraha
Dukaanka App-kada kaliya, Netflix wuxuu lahaa dakhliga sanad-maaliyadeedka 853 ee sannadkii hore, sida uu sheegay Sensor Tower. Iyada oo guddi ka mid ah 30%, taasi ka dhigan tahay 256 million in ay Apple, laakiin Netflix ka faa'iidi doonto heerka a of 15% in sannaddii kowaad oo Times (ka dhanka ah 30% sannadka ugu horreeya iyo 15% sida caadiga ah).
Qeybtan koowaad ee 2019, Netflix wuxuu soo saaray qaar ka mid ah 216 malaayiin doolar oo ku yaal Dukaanka App iyo Play Store, 15% ayuu ka hooseeyaa isla mudadaas 2018. Ogsoonow in dadka isticmaala codsiyada appka appka ah ay wali yihiin biilka App Store, macaamiisha cusub, waa inay si toos ah u galaan netflix.
taajirta taajka ah ee Netflix
Tinder, ayaa sidoo kale, waxay kor u kacday korodhka xayiraadda 42% labadii duhurnimo ee wareegga koowaad marka la barbardhigo wareegga koowaad ee 2018. Waxaa maanta gaaray 260,7 Milyan Dollar. Si kale haddii loo dhigo, Tinder waxay ka talineysaa qiimeynta ugu badnaan codsiyada moobiilka, marka laga reebo ciyaaraha.
Codsi adeeg-dadweyne oo horay loogu rakibay dhammaan akoonada casriga ah?
Snapchat ugu dambeyntii wuxuu soo koobayaa casriyeynta casriga ah ee la filayo Android
Helitaanka Horumarinta ee Xogaha Waayeelka: Baalasha ayaa u furan ciyaartoy dheeri ah
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/tinder-est-lapplication-mobile-hors-jeux-la-plus-rentable-devant-netflix-312793
OK Google, aniga iigayga: Google Pay in India ayaa hadda iibsan kara dahabka